Codsiga Shati-siinta ee Illinois - Sida loo helo ruqsad iibinta
Diskensary Cannabis Isticmaalka Dadka Waaweyn ee Illinois
Marabtaa inaad Furiiso?
Codsiga ruqsad bixinta ee Illinois 2020
Codsiyada Sisansiinta Khibradda Dadka Waaweyn ee Illinois
Codsiyada Shati Bixinta ee Illinois dabooli mid kasta oo ka mid ah 30-ka xubnood ee shardiga shuruudaha isticmaalka qaangaarka baahsan ee oggolaanshaha ururinta, laakiin buuxi codsigaas adigoo diiradda saaraya 250-ka dhibcood ee ay dhaliyeen Gobolka Illinois ee codsadayaasha xilliga caadiga ah. Kooxdaada Dadka qaan gaarka ah ee Illinois waxay isticmaalaan rukhsad qaybin waa mid aad u muhiim ah maxaa yeelay dhinacyo badan oo gooldhalinta ah waxay u baahan doontaa koox kaladuwan, laga yaabee in la isugu daro shirkad deyn xadidan leh. Ugu dambayntii, hubi inaad codsato liisanka marka la gaadho Janaayo 2, 2020 oo aad rajaynayso inaad nasiib u leedahay inaad hesho dalabkaaga oggolaanshaha dawada marijuana May illaa 2020. Codsiyada waxaa siidaayay gobolka Illinois Oktoobar 1, 2019. Laba su'aalo su'aalo ayaa lagaa qaadi doonaa. Codsiyada waxaa la xirayaa inta u dhexeysa 10ka Diseembar 2019, 2 iyo Janaayo 2020, XNUMX.
Cannabis Illinois Isku xirka Codsiga Diskensary
Sidee Codsiyada Shati Bixinta ee Illinois waa la dhaliyay:
Ku habboonaanta Qorshaha Tababarka Shaqaalaha (15 Qodob)
Sugidda Amniga iyo Diiwaangelinta (65 Dhibcood)
Qorshaha Ganacsiga, Maalgashiga, Qorshaha Hawlgalada iyo Qorshaha Sagxada (65 Dhibcood)
Aqoonta iyo waayo-aragnimada xashiishadda ama laxiriirta (30 Dhibcood)
Heerka Codsashada Sinnaanta Bulshada (50 Dhibcood)
Ku Dhaqanka Shaqada iyo Shaqada (5 dhibcood)
Milkiilaha Illinois (5 dhibcood)
Xaaladda halyeeyga ah (5 dhibcood)
Qorshaha Kala-duwanaanta (5 dhibcood)
2 dhibcood oo gunno ah haddii laxiriiro Qorshaha Faa'iidooyinka Bulshada
Akhriso qoraalka dhabta ah ee qaanuunka shuruudda ah ee isticmaalka qaangaarka -> Sharciga Khilaafaadka Isticmaalka Dadka Waaweyn ee IllInois
Sideed ku heli kartaa laysanka Diskensary Cannabis ee Illinois?
A: Waxaad koox weyn u leedahay laysankaaga xashiishadda cannabis - oo ay ku jiraan sinaanta bulshada, raasamaal, khibrad, iyo jaaliyad - oo ay ku jirto qareen fiican iyo xisaabiye - oo runti aad u shaqeyso oo qarash gareyso lacagta ay ku qaadaneyso sidii loo heli lahaa xashiishadda cannabis oo diyaar u ah ganacsi u furan. Miisaaniyadda in kabadan $ 100,000 habka codsiyada kaligiis. Markaad rajaynayso inaad haysid arjiga ugufiican, dooro bakhtiyaanasiibka - nasiibse waxaad ku guuleysan doontaa liisanka xashiishadda cannabis ee Illinois.
Immisa Ruqsadaha Diskensary Illinois Ayaa Jira?
sanadka 2020 Illinois waxay abaal marin siineysaa 75 shatiyada xashiishadda cannabis cusub
Sanadkii 2021 Illinois waxay abaal marin kale siinaysaa 110 shati xashiishadda cannabis
dawooyinkii hore ee dawooyinka cannabis waxay ka koobnaan karaan 110 kale oo xashiishad cannabis ah.
Waxaa shaki kuma jiro in sharciyeeynta marijuana raaxada iyo caafimaadka ee Illinois Shaki la'aan waxay kuu horseedi doontaa kor u kaca isticmaalka maandooriyaha. Si loo hubiyo in macaamiisha ay u helaan qiimo lacag, iyo waxyaabaha cannabis aysan ku dhicin gacanta qaldan, gobolka ayaa la yimid sharciyo kala duwan oo lagu xukumayo aaladaha marijuana ee Illinois.
Kuwa raba inay soo bandhigaan alaabada xashiishadda waa inay raacaan sharciga. Cid kasta oo aan ku shaqeynin si sharciga waafaqsan waxay la kulmi doontaa cawaaqib adag.
Hoos, waxaan ku eegaynaa faahfaahinta cusub Shuruucda xashiishka ee Illinois. Aynu ku galno sax, ma?
Codsadeyaasha Dispensary-ga ee Illinois Waa Inay Soo Bixiyaan Ubax Geedaha Cannabis
Sida ku xusan sharciga cusub ee Illinois, baayac-mushaharooyinka waxaa looga baahan yahay inay bixiyaan “noocyo kala duwan oo alaabo ah oo shatiyo ganacsi ganacsi noocyo kala duwan ah oo ah in alaabada laga heli karo iibka ay ka heli karto xarun kasta oo wax-soo-saar, farsamo-yaqaanno, kumbuyuutarro, ama shirkad maaliyadeed ma noqon doonto. in kabadan 40% wadarta guud ee la heli karo iibka ”.
Tani waxay la macno tahay macaamiisha inay heli doonaan noocyo kala duwan oo ku filan oo ay ka dooran karaan hal meel oo keliya. Waxay sidoo kale ka niyadjabineysaa xarumaha wax soo saarka iyo kuwa kale ee wax soo iibsada inay aasaasaan qalab ay iska leeyihiin halka ay si gaar ah u kaydiyaan badeecadooda. Isla qoraalkan, ayaa sidoo kale laga mamnuucay in loo diido badeecadaha ka yimaada beeralleyda ama beeraleyda soo buuxisa shuruudaha ugu yar.
Sida Illinois Cannabis Dispensary licence-ka loo yaqaan 'Illinois Cannabis Dispensary licence' u shaqeyso
Noocyada Xannaanada Cannabis ee shati leh ee ku yaal Illinois looma oggolaanayo inay dariishadaha daaqadaha wada maraan ama ma gudbiyaan wixii alaabo ah xashiishadda mashiinnada iibinta ah. Waxaa sidoo kale laga mamnuucay inay bixiyaan adeegyo gaarsiinta alaabada xashiishadda. Dhamaan kiliniyaasha waxaa looga baahan doonaa inay lahaadaan ilaalo ku shaqeysa iyo barta qalabka iibka. Bakhaar kasta waa inuu lahaadaa ugu yaraan laba qof oo shaqeeya saacadaha ay shaqeynayaan.
In kasta oo ay alaabadu kaydi karaan noocyo kala duwan oo ah xashiishadda cannabis, looma oggolaanayo inay "Iibiyaan shantooda ama wax kasta oo wax lagu beero oo nool". Intaa waxaa u dheer, dhammaan alaabooyinka ayaa loo iibin doonaa si shaqsiyeed, isla markaana iskuma xidhmi doonaan hal qiime. Alaab kasta “waa in si gaar ah loogu aqoonsadaa tirada iyo qiimaha risiidhada”.
Kaliya xashiishadda cannabis ee ruqsada haysta ayaa sharciyeysan inay iibin karaan cannabis gudaha Illinois.
Maxaad ubaahantahay inaad ka shaqeyso xarun dhexe ee Illinois?
Shaqaalaha shatiga shati u leh ee Cannabis ee Illinois ayaa u baahan doona in lagu tababaro sharciyada xashiishadda iyo tallaabooyinka loo dejiyay si loo xaqiijiyo nabadgelyada. Tallaabooyinka badbaadada noocan ah waxaa ka mid ah keydinta habboon, amniga si looga hortago xatooyada alaabada xashiishadda, iyo qorshe lagu raadinayo dhammaan keydka illaa la iibinayo.
Sharciga ayaa dhigaya in xarun kastaa ay lahaato qorshe dhammaystiran iyo “qorshaha nabadgelyadu sidoo kale waa inuu faahfaahin ka bixiyaa qandaraaslaha amniga gaarka loo leeyahay ee shatiyeynaya qaybta 10-5 ee Baadhista Gaarka ah, Alarm, Amniga Gaarka ah, Vendor Vendor, iyo Xeerka Locksmith ee 2004”. nabadgelyo ku bixi dhismaha guryaha.
Qorshaha ganacsigu wuxuu lahaanayaa hage faahfaahsan oo ku saabsan sida dukaanka loo maamuli doono labadaba muddada gaaban iyo mustaqbalka fog. “Qorshaha hawlgalka waa inuu kujiraa, ugu yaraan, tababbarka ugu wanaagsan ee howl-maalmeedka maalinlaha ah iyo shaqaaleynta”.
The Xashiishadda Isticmaalida Dadka Waaweyn ee Illinois waxaa sidoo kale looga baahan doonaa inay muujiso sida ay u qorsheyneyso inay ula dhaqanto shaqaalaheeda. Qodobo dheeri ah ayaa la siin doonaa hey'adaha qorsheynaya inay bixiyaan shuruudaha ka wanaagsan iyo jawi shaqo oo wanaagsan oo loogu talagalay dhammaan shaqaalaheeda.
Shuruudaha Xukumida Dadka Waaweyn ee Ruqsada Leh ee Isticmaalaya Dadka Waaweyn ee Adeegsiga Xannaanada Cannabis
Dhamaan kunturaadyada waxaa laga rabaa inay si dhakhso leh u ogeysiiyaan waaxda shati bixinta hadii aysan dooneynin inay cusbooneysiiyaan laysankooda shaqada. Muddada loo oggol yahay ogeysiiskani waa ugu yaraan 3 bilood ka hor taariikhda xidhitaanka.
Keenistayaasha waxaa looga baahan doonaa inay la shaqeeyaan waaxda shatiga si loo sameeyo qorshe xiritaan. Qorshahan “cinwaannada, ugu yaraan, wareejinta diiwaannada ganacsiga, wareejinta alaabada xashiishadda, iyo wax kasta oo kale oo ay waaxdu u aragto inay lama huraan tahay”.
Shuruucda Bannaanbaxyada Cannabis ee Illinois Saamaynaysa Codsigeeda
Sharciga maxalliga ah, booliiska, iyo waaxda ruqsaddu waxay xaq u leeyihiin inay baaritaan aan kala sooc lahayn ku sameeyn karaan xarumaha dawooyinka cannabis ee gobolka. Intaas waxaa sii dheer, saraakiisha xoojinta sharciga waxay xaq u leeyihiin inay galaan dhammaan waxyaabaha laxiriira xashiishadda, alaabada, iyo xitaa diiwaannada.
Haddii ay jiraan wax eedeymo ah oo meesha looga shakisan yahay in ay ku xadgudbeen sharciga, waaxdu waxay sameyn kartaa baaris ku saabsan codsadaha ', faahfaahinta dalabka, hay'adda ku wareejisa, sarkaalka maamulaha, wakiil wakiilka, iibiyaha saddexaad, ama qeyb kale ee laxiriirta. oo leh hay'ad fidinaysa ”.
Ciqaabta Illinois Cannabis Dispensaries-ga oo ku guuldaraysta in Sharciga la Raaco
Sida ku xusan Sharciga cusub ee Cannabis Illinois, "waaxdu waxay soo saari kartaa tixraacyo aan loo baahnayn oo ku saabsan xadgudubyada yar yar". Xeerarkan ayaa soo jiidan kara ganaax aan ka badnayn $ 20,000 xadgudub kasta. Xukunka ayaa lagu soo oogi doonaa qofka haysta shatiga rukunka. Shatiishu wuxuu codsan karaa dhageysi 30 maalmood gudahooda laga soo billaabo maalintii lasiidaayay. Mar alla markii waqtigan laga gudbo, tixraacku wuxuu noqonayaa kama dambeys mana laga doodi karo.
Sharciga wuxuu cadyahay in waaxda shatiga bixinteeda ay “diidi karto bixinta, diido dib u cusbooneysiinta ama soo celinta, canaanashada, meelmarinta tijaabada, joojinta, kala noqoshada, ama qaado talaabo kale oo edbin ah ama talaabo sharci daro ah oo ka dhan ah rukhsad kasta”. Qaar ka mid ah siyaabaha ay wariyayaashu sharciga ugu jebi karaan waxaa ka mid ah:
Si khaldan macluumaadka loo gudbiyay waaxda shatiga
Helitaanka ruqsadda marijuanaada iyadoo loo marayo qaab khiyaanooyin ah
Qaab muujinaya karti darida dariiqa baahintu u maareeyso ganacsigiisa
Ku xadgudubka sharciga iyo xeerarka xashiishadda
Ku lug yeelashada dhaqan anshax darro ah oo dhaawici kara bulshada. Qofkasta oo ka tirsan dadweynaha ayaa soo sheegi kara dhaqan kasta oo anshax xumo ah iyadoo la adeegsanaayo xafiiska, iyo saraakiisha xoojinta sharciga ayaa sameyn doona qaybtooda baaritaanka baarashada.
Wasaaraddu sidoo kale waxay dooran kartaa inay joojiso howlihii kaladuwanaanta. Kadib marka la bixiyo ogeysiiska ganaaxida, shati bixiyaha waxaa loo ogolyahay inuu codsado dhageysi 45 maalmood gudahood. Haddii waaxdu aysan ixtiraamin codsigan, ruqsada la joojiyay si otomaatig ah ayaa dib loogu soo celiyaa markey 45-ta cisho dhaafto.
Waa maxay shuruudaha si loo bilaabo Diskens Cannabis shati shati leh oo ku yaal Illinois?
Marka laga reebo helitaanka ruqsad shaqo, waxaa jira shuruudo kale oo kuwa raba inay dhisaan kaabayaal looga baahan yahay inay fuliyaan. Shuruudahan qaarkood ayaa ah:
Saraakiisha maamulladu waa inay cadeeyaan inay aqoon u leeyihiin agabyada xashiishadda ee kala duwan ee ay qorsheynayaan inay ku soo bandhigaan
Waa inuu lahaadaa qorshe ganacsi oo dhammaystiran oo muujinaya in kala-qaybinteeda lagu maamuli doono si sharciga waafaqsan.
Codsadayaasha sinnaanta bulshada waxay heli doonaan ilaa 50 dhibco haddii ay cadeyn karaan inay buuxiyeen shuruudaha qeybtaan. Codsadayaasha sinnaanta bulshada ayaa waliba xaq u yeelan kara maalgelin laga helo sanduuqa loo qoondeeyay ee lagu taageerayo ganacsiyada cannabis.
Isku soo duub Codsiyada Shatiga Sharciyeed ee Dadka Waaweyn ee Sharci Ahaan ee Illinois
Halkaas ayaad ku haysaa! Burburinta sharciyada cusub ee xashiishadda canbaariga ah ee Illinois ee xukumaya xashiishadda marijuana ayaa imanaysa Janaayo 2020. In kasta oo sharciyadan ay u muuqdaan kuwa awoodda leh, waxay ilaalinayaan dhammaan saamileyda ku jira warshadaha marijuana, oo ay ku jiraan milkiilayaasha iibinta iyo macaamiisha marijuana.
Haddii aad xiiseyneyso bilowga xashiishadda cannabis, waa inaad tixgelisaa inaad la hadasho qareen khibrad leh si uu kaaga caawiyo fahamka sharciga iyo inuu kugu hago isticmaalkaaga dadka waaweyn ee isticmaalaya liisanka shati bixinta ee Illinois.
Codsiga Shatiga Shaqada ee Dadka Waaweyn ee Illinois
Waa kan qoraalka ku yaal fiidiyowga & Podcast;
Welcome, Waxaan ahay Tom - i raadso adigoo gariiraya qareenka Cannabis, ka dibna gujinaya bartayada websaydhka, warshadaha cannabis qareenka.com. Ilaha khadka tooska ah ee loogu talagalay dhammaan su'aalahaaga ee ku saabsan wareejinta warshadaha xashiishadda - sida mawduuca maanta aad loo jecel yahay ee Illinois - shatiyadaha cusub ee alaabada. Waxaan daboolidoonaa codsiyada u saamaxaya ilaa 500 oo soo galootin cusub ah suuqa suuqa Cannabis ee sanadaha soo socda.
Si dadka looga caawiyo inay ogaadaan macluumaad ku saabsan sida loo helo qof qaan gaar ah oo shuruud ku xiran u isticmaalaya bixinta shatiga ururinta (taasi waa runtii magaca - hoosta) qaybta 15-25 ee Sharciga Isticmaalka Dadka Waaweyn ee Illinois - burburin waxyaabaha aad jeceshahay oo iska qor. Waxaan dooneynaa inaanan dabooli doonin oo keliya dalabka, laakiin sidoo kale sida loo dhaliyo si kor loogu qaado fursadahaaga lagu soo xulay. Shatiga Fasax Qaadashada ee Dadka Waaweyn ee Illinois.
Hubso inaad fiirsato illaa dhammaadka maxaa yeelay waa wakhtigaas oo aan kuu sheegi doonaa imisa shaqaale ayaa u furi doona ganacsi Janaayo 1, 2020. - iyo waxa 2 nooc ah oo ay ka jiraan.
Hadana waxkasta oo aad ubaahantahay inaad sameyso si aad uhesho qofkaaga shuruudi ku xiran ee shuruudu ku xiran tahay inaad adeegsato ruqsada saami qaybsiga ee Illinois.
Wasaaradda Beeruhu waa - taasi waa khasab - waxay soo saarayaan ilaa 75 rukhsad oo ogeysiis ah inta u dhexeysa Luulyo 1, 2020. Sidoo kale Disembar 21, 2021, waaxda beeraha waxay soo saari doontaa illaa 110 kale oo shardi u leh dadka waaweyn oo adeegsanaya rukhsadaha bixinta. Wixii ka dambeeya Janaayo 1, 2022, xaaladda shuruudiisu waa mid joogto ah - laakiin kama badnaan karto 500 oo khubaro cusub oo gobolka ah. Haddii aan loo baahnayn sahay dheeraad ah. Inbadan oo ku saabsan taas fiidiyowyada kale.
Marka aynu ka wada hadalno waxa si gaar ah u galaya codsiyada liisanka ee mawjadaha ugu horreeya ee dadka waaweyn ee isticmaala duruufaha shuruudaysan.
Marka hore - sharcigu wuxuu ogol yahay in la kala diro joqoraafi ahaan qaybaha kala-baxa. Waa tan liiska cidda heleysa mawjaddii ugu horreysay - laga yaabee inaad arki karto soo-saare ama labo, muxuu Bloomington u helayaa keliya marka peoria helo 3 - waxaan ka qabow nahay marka loo eego kuwa caymiska ku shaqeeya - dabcanna aagga chicago ayaa helaya 47.
Kusoo dhaqaaqida qadka Qeybta 15-25 - waxaan nimid shuruudaha dalabka. Kahor intaanan taas soo gaarin - fadlan hubso inaad ku aragto kuwan iyada oo loo marayo muraayadda ah sida loo fulin doono dalabka. Sidaa darteed - waxaan ku bilaabaynaa Qeybta 15-30 (c) ee sharciga xashiishadda.
250 dhibcood ayaa la siin doonaa codsiyada dhameystiran - ka dibna Gobolka ayaa dooranaya kuwa guuleysta. Waa tan barta weyn - Amniga iyo Diiwaan Gelinta 65 dhibcood. Taasi waa sax in in ka badan 25% ee qodobbadaada ay ka yimaaddaan amniga iyo xafidista diiwaangelinta - oo waxaan arkay diiwaannada macmiisha qaarkood, intee ayey wanaagsan yihiin diiwaannadaada - Jeffery? Ninka la yiraahdo Jeffery ee daawanaya tan - waxaan rajeynayaa inaan kaa saaray.
Sida muhiimka ah Sugidda Amniga & Diiwaangelinta ayaa ah Goobaha Ganacsiga, Maalgashiga, Qorsheynta iyo Qorshayaasha Dhulka - 65 dhibcood. Waxaan ka sameyn doonnaa fiidiyowyo bixiyeyaasha adeegyadan qaar ka mid ah wararkayaga sharci-dajinta cannabis - markaa garaac batoonka iska-qor si aad uga dhigto taas, iyo haddii aad ku sugan tahay wershadaha aqoonta u leh qodobbadan - waxaad xor u tahay inaad igu soo booqato warshadaha cannabis. qareen oo wicitaan ii yeer.
Marka hadda wax ka badan 50% ee dhibcaha lagu abaal mariyo Ruqsooyinka Kaabista Cannabis ee Dadka Waaweyn ee Illinois, waxaan u jeednaa waxa ku xiga ee ugu muhiimsan arjigaaga. Heerka Codsashada Sinnaanta Bulshada - La soco fiidiyowgayada deyrtan. Waxay u qalantaa 50 dhibcood. Waxaan had iyo jeer sheegnay in cannabis ay tahay koox koox isla markaana xubin weyn ka ah kooxda 'suuqa marijuana sharciga ah ee Illinois' waa sinnaan bulsho - 20%
Marka xigta, waxaan u aadnaa 30 dhibcood oo ah Aqoonta iyo Khibrada Warshadaha - waa muhiim sababta oo ah tayada badeecada gobolka waxeey si weyn u hagaagtay 2dii sano ee la soo dhaafay oo aan heystay kaarkheyga qaarna wax soosaarayaal aad u wanaagsan ayaa halkaa hada jooga - waxaanna qabaa in farshaxanka koraya uu waxbadan keeni doono - hadana waxbaa jira. inta u dhaxaysa farshaxanimada ayaa koraysa iyo weheliso markaa u fiirso isku-darkaas.
Kahor intaanan u kala hadhin arrimaha kaladuwan, qodobka laba-lambar ee ugu dambeeya waa Qorshaha Tababarka Shaqaalaha - oo qiimihiisu yahay 15 dhibcood. Tan ayaa sidoo kale looga baahan yahay dalabka - iyo mid ka mid ah sababaha ay qaali ugu noqon doonaan in la isu keeno. Xusuusnow inaad u tababarto shaqaalaha inay fahmaan qawaaniinta iyo shuruucda - ii sheeg haddii aad u baahan tahay xoogaa caawimaad ah siyaasadahaas.
Hagaag. aan aragno - 60 jeer 2 + 50 + 30 + 15 = 215, taasoo ah sababta aan ugu yeerayo 35ka harsan ee haray kala-duwan.
Ku Dhaqanka Shaqada & Shaqada - 5 dhibcood
Qorshaha Deegaanka - 5 dhibcood
Milkiilaha Illinois (51%) - 5 dhibcood
Halyeeyga ayaa leh 51% - 5 dhibcood
Qorshaha Kala-duwanaanta - 5 dhibcood iyo 2,500 ereyo
Halkaas waxaad ku tageysaa 250 dhibcood - laakiin 2 dhibcood oo abaalmarin ah ayaa la siiyaa qorshe si aad ula falgasho bulshada - 252 ugu badnaan dhibco. Waxaan rajeyneynaa inaad dhamaantood ka heli doontid.
Halkii aan ka gudbi lahaa mid kasta oo ka mid ah 30ka shey ee xaaladda liidata ee qofka weyn ee shardiga u leh isticmaalkiisa - waxaan rabaa inaan ku soo afjaro fiidiyahaan 10 daqiiqo ka yar si aan ugu dhajiyo Linked'in iyo qoraalkan “maqaal” oo ay doorbidaan - waa madal ka duwan kan youtube - laakiin hadaad rabto inaad igu raacdid xiriirinteyda astaanteyda waxay kuxirantahay qeexitaanka.
Hal shay oo aan ku jirin 30ka shey - cinwaan - haddii lagu doorto waxaad haysataa 6 bilood oo aad gobolka siiso cinwaankaaga.
Imisa imisa weeyaan ayaa furmi doonta 1-da Janaayo? Inta u dhaxaysa 55 iyo 110. 55 ka mid ah dawo-bixiyeyaasha caafimaad ee hadda jira waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay u furan yihiin adeegsiga dadka waaweyn iyo xitaa meel labaad. Ma sugi karo inaan arko nambarada oo soo baxaya Janaayo.
Nasiib Fiican Codsigaaga Shatiga Kaabista Cannabis ee Illinois
Kusoo Dhawow News Cannabis Legalization News Halkan.